Voadika ny 22 Avrily 2012 5:29 GMT
Matetika dia raisina ho vahaolana amin'ny olana rehetra atrehan'izao tontolo izao ankehitriny ny fanatontoloana. Saingy misy ihany koa ireo zavatra ateraky ny fanantontoloana no tena mahafaty. Ohatra, ny filazana ho foana ny sisintany hahafahan'ny firenena tandrefana manary ny plastika sy ny fako avy tany amin'ny toeram-pitsaboany any amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Afa-manao izany tsy misy mpanelingelina ry zareo noho ny tsy fahampian'ny fiampangana sy ny fanaraha-maso any amin'ireo firenena tahaka an'i Pakistana, izay efa iharan'ny fanariana fako nandritra ny 30 taona.
Fako medikaly tsy voakarakara hita anatin'ny ranomasina. Sary avy amin'i Raja Islam. Copyright Demotix (1/11/2010)
Mitatitra ny fitsidihany ny tobim-pako tany Lahore i Uroos:
Plastika tsy levona ho azy mitoby any amin'ny fanariam-pako goavana any Karachi. Sary avy amin'i Syed Yasir Kazmi. Copyright Demotix (15/12/2009)
Niresaka amin'ny antsipirihany mikasika ny hafaliana entin'ny fanafàrana ireo aretina azo avy amin'ny fako plastika ao Lahore ny Pakistan today: